प्रचण्ड–नेपाल पक्षको कारबाहीपछि विशाल भट्टराईको प्रतिक्रियाः डेरावालले घरबेटीलाई निकाल्ने ? | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeफागुन १९, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतलाई कारबाही गरेपछि ओली समूहले भने कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ओली समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरुलाई कारबाही गर्नु भनेको डेरावालले घरबेटीलाई निकालेको घोषणा गर्नुजस्तै भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘कारबाहीको कुनै अर्थ छैन । डेरावालले घरबेटीलाई निकाल्नुको के अर्थ ? यसको कुनै अर्थ छैन । मुल पार्टी हामी नै हौं, यसको वैधानिकता छैन ।’
...अनि डिनर चल्दै थियो नमस्कार गरेर म बिदा भएँ : वामदेव गौतम